2 ụzọ zọpụta MMS Files na iPhone ka a Windows / Mac Computer
> Resource> iPhone> Olee otú iji Zọpụta MMS Files na iPhone ka a Computer
Olee otú m pụrụ ịzọpụta a nnọọ ogologo MMS akụkọ ihe mere eme na kọmputa m?
M nwere ogologo MMS akụkọ ihe mere eme na m iPhone. Mgbe m na-eme atụmatụ iji zọpụta ha nile na-kọmputa m, Mgbakwụnye (ọtụtụ n'ime ha bụ foto) na a pụghị ime kwajuru, ka m na-apụghị ịzọpụta ha ka ha igwefoto mpịakọta tupu m nyefee ha ka ha kọmputa m. Olee otú m pụrụ ịzọpụta niile MMS faịlụ na m iPhone na kọmputa? Biko nyere!
Ọ bụrụ na gị niile MMS ka bụ na gị na iPhone, e nwere ụzọ abụọ n'ihi na ị na-azọpụta ndị MMS na kọmputa, gụnyere Mgbakwụnye. Otu na-na ịgụ isiokwu gị iPhone ịzọpụta MMS faịlụ ka kọmputa, na ndị ọzọ na-adịrị gị iTunes ndabere iji nweta ha si.
N'agbanyeghị nke ụzọ ị na-ahọrọ, ị nwere ike họrọ iji Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery maka Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac). Ma nke ha ekwe ka ị na-azọpụta iPhone MMS faịlụ na kọmputa na ma ụzọ kwuru tupu. Ha na-akwado iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, na iPhone 3GS. E wezụga exiting MMS na gị iPhone, Wondershare Dr.Fone maka iOS ike ka ị na-agbake ehichapụ MMS na gị iPhone. Dị nnọọ download free ikpe version inwe a na-agbalị na mbụ. Ịnwere ike ihuchalu ha n'ihu na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Ọzọ, ka ego otú ịzọpụta iPhone MMS na kọmputa na ụzọ abụọ n'okpuru. Were Windows version dị ka ihe atụ. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, ị nwekwara ike mezue ọrụ yiri nzọụkwụ.
Nkebi nke 1: Kpọmkwem ike iṅomi na-azọpụta MMS faịlụ site na iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS na kọmputa
Nkebi nke 2: Wepụ iTunes ndabere ịzọpụta MMS na iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS
Nkebi nke 1: Kpọmkwem ike iṅomi na-azọpụta MMS faịlụ site na iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS
Nzọụkwụ 1. Run Wondershare Dr.Fone maka iOS na jikọọ gị iPhone na kọmputa
Ka na-agbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows) ọnụ. Na-agba ọsọ ya na kọmputa gị mgbe echichi, na jikọọ gị iPhone. Mgbe ahụ ị ga-ahụ isi window n'okpuru.
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị iPhone maka data na ya
Ị pụrụ nanị pịa "Malite iṅomi" na isi window. Usoro ihe omume ga-ịga n'ihu ike iṅomi gị iPhone dị ka ndị a. Ị nwekwara ike gaa elu mode iji nweta a miri Doppler n'ihi na gị iPhone site na ịpị "Advanced mode" na ala, ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
Nzọụkwụ 3. Preview na-azọpụta iPhone MMS gị na kọmputa
N'oge Doppler, ị nwere ike ihuchalu ihe dị na Doppler N'ihi. Mgbe ị na-na hụrụ gị chọrọ data, ị nwere ike ị kwụsịtụ ma ọ bụ kwụsị iṅomi. Mgbe iṅomi completes, niile hụrụ data na-nkenụụdị.
N'ihi na MMS, ị nwere ike ihuchalu ha site na ịpị "Ozi". Mgbe ahụ ị pụrụ ele zuru ọdịnaya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta MMS mgbakwunye iche iche, ị nwere ike ịlele "Ozi Mgbakwụnye". Ha niile na-ahụ. Akara ihe ị chọrọ na pịa "Naghachi" zọpụta ha gị na kọmputa na otu Pịa.
Cheta na: N'ụzọ dị otú a, usoro ihe omume na-hụ na nso nso-ehichapụ MMS. Ọ bụrụ na ị chọrọ ikewapụ ha, ị pụrụ iji bọtịnụ n'elu: Naanị gosipụta ehichapụ ihe.
Nzọụkwụ 1. ndabere gị iPhone na iTunes
Nke mbụ niile, na-agba ọsọ iTunes na kọmputa gị na jikọọ gị iPhone ndabere ya na iTunes. Mgbe eme ya, i kwesịrị wepuÚ iTunes na kọmputa gị. The iTunes ndabere faịlụ bụ unreadable. Ọzọ, i kwesịrị wepụ ya.
Mgbe ị na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone na kọmputa gị, pịa "naputa site na iTunes ndabere File" n'elu nke isi window. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ window n'okpuru. Gị niile iTunes ndabere faịlụ na kọmputa na-hụrụ ma e depụtara n'ebe ahụ. Họrọ onye na ọhụrụ ụbọchị maka gị iPhone na pịa "Malite iṅomi" wepụ ọdịnaya na ya.
Doppler ga rechapụ gị sekọnd ole na ole. Mgbe ahụ, ị ​​ga-enweta a Doppler N'ihi ya, nke bụ otu ihe dị ka onye ị ga-esi site mbụ ụzọ. Ịpị "Ozi", ị nwere ike ịhụchalụ dum ọdịnaya nke gị MMS. Ịpị "Ozi Mgbakwụnye", i nwere ike iche iche ịzọpụta MMS Mgbakwụnye na kọmputa gị. Dị nnọọ akara ihe ị chọrọ na pịa "Naghachi" zọpụta ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Otú nyefee mp3 ka iphone n'ihi na windo / Mac
Common iPhone Email njikọ Nsogbu na Ụzọ idozi ha